Depiote Razaranaina Nomenirina Nahilikiliky ny mpitondra HVM
Filoha nandatsa-dra ny Malagasy Tsy maintsy hesorinay, hoy ny depiote
Roso ny tolon’ny depiote ho an’ny fanovana ary tsy hanaiky raha tsy miala ny filoham-pirenena. Hirodorodo hanatitra fitoriana mitaky ny fialan’ny filoha eny amin’ny Fitsarana noho ny fandatsahan-dra sy ny fandatsahana aina Malagasy izy ireo sy ny vahoaka anio alarobia.
Antoko Leader Fanilo Tsy azo ekena intsony ny fandatsahan-dra
Sesilany ny fanambarana ataon`ireo mpanao politika manoloana ny toe-javatra nampalahelo niseho tetsy Analakely ny sabotsy 21 aprily teo. Nanao fanambarana ny antoko Leader fanilo tarihin-dRabesa Zafera Antoine sy Lalaina Berthnes tetsy Antaninandro omaly talata 24 aprily tetsy Antaninandro.
Ho resy tosika ny fitondrana Hiverina ny kisarisarin’ny “Panorama 1991”
Samy miandry izay hiafaran’ny fanjakana Rajaonarimampianina ny rehetra hoe hanao ahoana ? Nilaza ny tsy mijanona fotsiny amin’ny resaka fitakiana momba ny lalàna mifehy ny fifidianana intsony fa mivoy ny hialan’ny filoha noho ny fandatsahan-dra sy famonoana ny Malagasy ka efa fanjakana mihosin-dra no misy.
Voahangy Rajaonarimampianina Mihorohoro ny ho very fihinanana ?
Tsy fantatra mazava ankehitriny na efa eto an-tanindrazana i Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny filohantsika na mbola any ampitan-dranomasina.
Demokrasia eto Madagasikara Fehezina lalàna adaladala, hoy ny Teza
Sesilany ny fanehoan-kevitr’ireo hery velona politika manoloana ny zava-misy ankehitriny eto amin’ny fireneny. Nilaza ihany koa ary ny antoko Teza, tarihin’ny filohany, Jean Louis Rakotoamboa fa miditra amina lojikam-pifandonana isika amin’izao fotoana,
Antoko VHT Tsy tokony hiziriziry intsony ny fitondrana
Nanao antso avo eo anatrehan`ny firenena ny Antoko Vonona Hijoro ho an`ny Tanindrazana (VHT). Nisafidy ny toerana tao amin`ny Telozoro Andrefanambohijanahary izy ireo nanaovany ny fanambarana manoloana ny zava-niseho teny Analakely ny 21 aprily 2018 izay nitarika faharatrana sy vono olona.
KMF/CNOE Fifidianana anatin’ny fitoniana no vahaolana
Omaly talata no nanao fanambarana tetsy amin’ny foibeny Immeuble Santa Antanimena ny KMF/CNOE manoloana ny fikatsoan’ny fiainam-pirenena.
Gaga sy talanjona ny olona tao Fianarantsoa tsy mba nahita ny solombavambahoakan’izy ireo niara-dia tamin’ny solontenan’ny fitondram-panjakana nandeha fiaramanidina manokana na “jet privé”
namangy ny fianakavian’ireo 8 mianaka niara-maty noho ny fihotsahan’ny tany tao Ivory ny fiandohan’ny herinandro teo. Ireto avy ireo delegasionina manokana nandeha fiaramanidina nihazo an’i Fianarantsoa ny 9 janoary teo : Minisitra Rasoazananera Monique, Andriamosarisoa Jean Anicet, Andrianisa Mamy Jean Jacques, Lantoniaina Rasoloelison, Beboarimisa Ralava, ny filohan’ny antenimierandoholona Rivo Rakotovao, ny loholona Riana Andriamandavy, ny loholona Olivier Rakotovazaha … Voasivana kosa ny solombavambahoaka Razaranaina Nomenirina. “Noho ny fahatapahan’ny lalana Antananarivo Fianarantsoa, dia tsy mba afaka niombona alahelo tamin’ny fianakavian’ireo traboina ny tenako, kanjo naheno hoe nisy delegasionina manokana avy amin’ny governemanta tonga tany. Amin’ny maha solombavambahoakan’ny tanànan’i Fianarantsoa ahy anefa dia tsy mba nampandrenesina akory mba hiara-dia amin’ny delegasionina any. Izay ve ny fifampitondrana eto amin’ity tany ity ? Tsy firaharahiana ve ny fandraisana ny tenanay avy any sa fanadinoana ?”, hoy izy. Amin’ny andro toy izao no tokony hiray fo sy hiray aina, miara-miombon’alahelo amin’ny mana-manjo ny tenako amin’ny maha solombavambahoakan’i Fianarantsoa, fa izany rehetra izany no fifampitondrana sy ny fametrahana ny maha olom-boafidy anay eto amin’ny tany sy ny fanjakana, hoy ity depiote. Izy irery no manampahefana tsy tao anaty lisitra, ka tsy hay na tsy antonona intsony ny fiaramanidina na fitia te hanavaka azy tsotr’izao no natao na koa misy manampahefana avy ao Fianarantsoa tsy faly aminy, ka dia nabaribary izany. Marihina anefa fa ao anatin’ny vondrona parlemantera HVM izy. Aza mijery ny tsy eo fa solontenan’ny fitondram-panjakana iray manontolo ireo, hoy kosa ny Filohan’ny antenimierandoholona. Misy iraka samihafa any ary tsy maintsy ho tonga eo izy … Tokony ho aty ihany koa izy fa tapaka ny lalana dia tsy tonga izy, hoy indray i Rivo Rakotovao avy eo. Amin’ny zavatra toy izao dia tsy hifanome tsiny isika, fa ao anatin’izay mba vita no mifampisaotra satria mifaninana amin’ny tsara, ka tsy ny fahavoazan’ny olona no tsara fa ny fifampisehoana ny fihavanantsika, hoy hatrany izy.